Nanambara ny Tompo fa ho tonga ny farany sy ny loza | Apg29
Nanambara ny Tompo fa ho tonga ny farany sy ny loza
Ao amin'ny Ezekiela toko faha-7, dia maminany amin'i Ezekiela ny Tompo ary miresaka ny fotoana maizina sy ny loza ho avy. Loza iray izay tsy manam-paharoa, ary irery amin'ny karazany.
Ezekiela 7: 5 - Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, avy ny loza, loza samy hafa; Ho avy ny farany, eny, ho tonga ny farany! Dia mifoha izy ka tonga aminao. Indro, ho avy izany!
Ao amin'ny Ezekiela toko faha-7, dia maminany amin'i Ezekiela ny Tompo ary miresaka ny fotoana maizina sy ny loza ho avy. Loza iray izay tsy manam-paharoa, ary irery amin'ny karazany. Nambarany fa efa tapitra ny fe-potoana ho an'ny olona, ​​fa antomotra ny andro ary tafatsoaka amin'ny zorony efatra amin'ny firenena ny fe-potoana. Ny Tompo dia manonona ny loza ho avy toy ny sabatra, pesta ary mosary. Miresaka momba ny fanjakana iray izay ivoahan'ny hery sy ny tsy fatiantoka, izay ny tanan'ny olona milentika sy ny lohalika ho toy ny rano. Ireo teny ireo dia tsy mihatra amin'ny andron'i Ezekiela fa teny faminaniana mandritra ny fotoana iainantsika sy hiakarantsika.
Nahazo hery ny FEMA
Ny FEMA dia mijoro ho an'ny Federasiona misahana ny fitantanana vonjy maika ary masoivoho governemanta ao Etazonia izay napetraka amin'ny loza lehibe sy / na ady. Sambany teo amin'ny tantaran'i Etazonia no nanao sonia ny fanambarana iray momba ny fahavoazana ny fanjakana rehetra fa ao anatin'ny toeran'ny voina izy ireo. Midika izany fa amin'ny fotokevitra FEMA dia naka ampahany maromaro na maromaro rehefa hanapa-kevitra amin'ny ady amin'ny tsimokaretina corona. Ankoatry ny zavatra hafa, ny tolo-kevitra dia napetraky ny FEMA hanara-maso sy hanara-maso ny hoe inona sy ny entana mivoaka ny firenena. Midika izany fa amin'ny hetsika manokana dia mandray ny fahefan'ny loza FEMA, ary avy eo dia an'ny fanjakana ny polisy avy eo.
Efa nanoratra aho taloha hoe toa miomana amin'ny loza lehibe eto amin'ny firenena i Etazonia amin'ny fametrahana ireo "Fema Camp", izay hita manerana an'i Etazonia, izay ny ankamaroan'izy ireo dia mitovitovy hatrany amin'ny tobin'ny fonja. Androany izy ireo nefa tsy vonona, fa afaka mandray olona olona am-polony 100.000 ao anatin'ny toe-javatra maika na mitaky raharaha. Ny fanontaniana hoe sao dia hampiasaina hanasazy na hanatanterahana olona mandritra ny fotoam-pahoriana ireo toby ireo ka tsy mifidy ny handray ny mariky ny bibi-dia.
Rehefa hitantsika ny fihetsiky ny fitondram-panjakana sy ny mpitondra, dia famerim-pianarana fotsiny izany ny ho avy. Rehefa mitranga ny fandrosoana, ho tsapantsika ny fomba ovaina ny firenena ho toy ny polisy, izay hitranga ny lalàna masiaka, izay hanananao fotoana hanasaziana ireo olona tsy miankohoka amin'ireny lalàna sy fepetra manohitra ny Kristianina ireny. Ny tahotra mitovy amin'ny olona ankehitriny dia ho lehibe kokoa mandritra ny fotoam-pahoriana ary vonona ny hanao na inona na inona ianao mba hampihavana ny fandriampahalemana. Ny olona izay tsy hiondrika ihany dia ireo olona resy ho an'i Kristy amin'ity vanim-potoana manahirana ity - izay ametrahanao ny fiainanao eto an-tany, handresena ny lanitra.
Ny fanjakana 50 rehetra eo ambany fanambaràn'ny loza sambany tamin'ny tantaran'i Etazonia | TheHill